Owesifazane kwakungeke, mhlawumbe, owesifazane, uma yena cishe kusukela ezalwa bangezi zonke izinhlobo ubucwebe. Ubuhlalu has a amandla akhethekile magic ngoba bezibona umcabango womuntu wesifazane. Lidonsa kokubili amantombazane asemancane Baubles elula futhi kube lula futhi socialite zikanokusho zobuhlalu zokuhloba, enikeza ngamunye ngamunye yayo futhi athandeke nakakhulu.
Lobuhlalu Namasongo, imigexo kanye imigexo Sekuyisikhathi eside kufakwe ekuphileni sowesifazane, futhi konke kwaqala kudala.
Kusukela ezikhathini komlando beza kithi amasampula lobuhlalu ezibaziweyo ethanjeni noma itshe. Zeminyaka eziningana BC eSiriya, bese ekhatsi Lebanon eseqala ukuveza ubuhlalu Artisanal, okuyinto babebhekwa njengabangakufanelekeli ngesikhathi iziphandla. AbaseFenike a yokuhweba exchange ubuhlalu oye zasakazekela iMedithera.
EMesophothamiya, egqoke ubuhlalu kwakuzoba uphawu lokuthi ingcebo kanye nesimo okusezingeni eliphezulu nomphakathi. EGibhithe, wafunda womshini ubuhlalu ngu fusing ingilazi mass zibe yizicucu asebenza ngebhethri, zibiza ngempela eqolo, kanti oFaro egqoka kwabo, setha igolide, njengoba iziphandla, ubuhlalu namasongo sasingakagcwaliseki yasungulwa.
Indawo ebaluleke kakhulu ukukhiqizwa ubuhlalu kamuva owaba Venice. Ubuhlalu isetshenzisiwe ukwenziwa ubuhlalu. Kwakubonakala Corporation amakhosi ukwenziwa ubuhlalu futhi ubuhlalu ezinemibala. Imishini yokukhiqiza kakade ubonakele ekuqaleni kwekhulu le-19, waqala ukuthuthukisa beading. Namasongo elengayo, zemali, umsebenzi womfekethisi ingilazi amaKhaladi pads, luqhephuke futhi ibhulashi - konke ngokufuna dandies kanye abesifazane emakhulwini eminyaka adlule.
Ekupheleni kwekhulu le-19 ubuhlalu waphawula abaculi Art Nouveau isitayela yokuhlabelela ka ukwelukwa namasongo, kanye nezinye imihlobiso yazo zonke izinhlobo kuhlakazeka emhlabeni wonke. Ubuhlalu sichithiwe yabesifazane izingubo futhi ekhaya impahla, izikhwama nezicathulo zikanokusho. Beading kancane kancane sangena eziningi zokudala obuciko izinkulungwane needlewomen emhlabeni wonke wasiphakamisa ukutadisha ezithakazelisayo art imihlobiso.
ERussia, ngele ndlela ifikile kwesikhashana, kodwa wazinza washaya nezimpande ezijulile. Lokhu kungenxa yokuthi abesifazane Russian abaye benza njalo ngenalithi, futhi uhlobo olusha lokusungula ngokushesha bengasakwazi ukuthwala kude, unezela Motifs yobuhlanga Russian kuleli hlobo lobuciko. Lapho intshiseko lolu hlobo lobuciko kwaba esemusha, yena waba ehlotshiswe cishe konke: albhamu, amabhokisi, zemali, anezikhwama nezibaya. It wasetshenziselwa womshini iziko zesikrini, Upholstery ifenisha kanye ideskithophu izinto.
Namuhla inqubo ukwelukwa lobuhlalu ezinemibala lahlukaniswa laba ezindaweni ezimbili: Eyokuqala - a imihlobiso ezincane ezifana bead namasongo, imigexo, nezigqizo, izibopho. Futhi okwesibili, mkhuba engengaphansi ezivamile - kungcono izingxenye ezinkulu ingaphakathi, ezifana odongeni panel. Ubuhlalu idluliselwe ngendlela ubuhle bemvelo izimbali, izihlahla, namathafa, kanye nezinye izithombe.
Ongoti imikhiqizo ephuma ubuhlalu usho ubuhlalu ifa magic ezithile kanye nemikhiqizo wadala uxhumano obonakala ulula ezinemibala ingilazi izingcezu kusetshenziswa inaliti nentambo, captivate umphefumulo iminyaka eminingi.
EMelika, amakhosi yaleli fomu art ngokuthi bead abaculi. Kuba ngempela abaculi, amakhosi izikebhe zabo abasungula yobuciko lobuhlalu anemibala amancane izingcezu lesikhumba, indwangu, ngamatshe, ngensimbi izesekeli nokunye. amakhosi Akwaziwa kuleli fomu art ababevela emazweni amaningi, njenge-Karen Paust, Edda Blum, Margot Field.
Lobuhlalu Namasongo, imigexo kanye imigexo manje ukudala amakhosi amaningi Russian lokhu mkhuba okuphawulekayo imisebenzi. Imisebenzi yabo umcabango ezahlukene kanye ubufazi nangobuciko, futhi engalawulwa isitayela esiqinile Folk futhi isisekelo yobuhlanga. Ubuhlalu ahlale, amazwe ikakhulukazi esuka eYurophu. Needlewoman, ngaphambi kokuba uqale ukudala indalo yakho, kuhambisana kahle kukhethwa impahla, Kubalulekile kakhulu ukuthi umkhiqizo, okungase kamuva abe wobuciko, akalilahlile ngayo kuqala iminyaka eminingi noma ngisho emashumini eminyaka.
Amanzi Roger: indaba yomunye wabasunguli be-Pink Floyd